Fizahan-tany Ginea Ekoatorialy: Resort Sofitel kintana 5, fa aiza ny mpitsidika?
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fizahan-tany Ginea Ekoatorialy: Resort Sofitel kintana 5, fa aiza ny mpitsidika?
Tsy dia fantatra loatra momba ny fahafahan'ny fizahan-tany any Guinea Equatoriale. Ilay firenena dia fantatra ho firenena nikatona fanta-daza izay nivadika fizahantany mba hanampy hameno ny kitapom-bolany.
Eo amoron-dranomasina izay mitazana ny Hoalan'i Guinea, ilay kintana tsara tarehy Sofitel Sipopo Resort, hotely avo lenta ao amin'ny tranobe misy accents ankehitriny, dia 8 km miala an'i Santiago de Baney ary 26 km miala ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Malabo.
Ilay tanàna namboarina dia nosokirina tamina ala taloha tamin'ny taona 2011 izay mitentina 600 tapitrisa euro (670 tapitrisa dolara), tany am-boalohany mba hampiantranoana fihaonana an-tampon'ny Vondrona afrikanina mandritra ny herinandro ary hanehoana ny fiakaran'ny fanjakana manankarena solika.
Fiarakodia 16 kilometatra (10-km) miala ny renivohitry Guinea Equatoriale Malabo, misy ivon-toeran'ny fihaonambe midadasika, ny hotely Sofitel Malabo Sipopo Le Golf, ary koa villa mihaja 52 - iray isaky ny filoham-panjakana hanatrika ny tampon'isa - samy manana ny dobo filomanosany avy. Misy ihany koa ny golf 18-hole, trano fisakafoanana maromaro ary torapasika manokana miambina ny polisy.
Nandritra ny folo taona lasa izay, Sipopo no vatosoa tamin'ny paikady hitaomana ny mpitsidika avo indrindra ho an'i Guinea Equatoriale hanakorontanana toekarena voa mafy noho ny fidonan'ny fidiram-bolan'ny solika.
Toa foana ny tanàna. Nisy hopitaly iray nanampy taorian'ny nananganana ireo villa, saingy tsy ampiasaina, hoy ny loharanom-baovao. Tamin'ny 2014, naorina ny toeram-pivarotana lehibe iray tao amin'ny toeram-pivarotana hividianana magazay 50, lalan'ny bowling, sinema roa ary faritra filalaovan-jaza.
Saingy nilaza ny mpandray fandraisam-bahiny iray fa mbola tsy nisokatra ilay toerana, ary nampiany hoe: “Raha te hividy fahatsiarovana ianao dia tsy maintsy mankany Malabo.” Tamin'ny alina, nisy limosine mamirapiratra tonga tao amin'ny trano fisakafoanana mihaja hanaterana ny fisakafoanana.
Any amin'ny morontsiraka afovoan'ny Atlantika afovoany afrika, Guinea Equatorial dia nameno ny tambajotra sosialy niaraka tamin'ny hafatra momba ny lazany ho fialantsasatra fialantsasatra. Ny drafitra fananganana tobin'ny mpandeha vaovao ao amin'ny seranam-piara-manidina ao an-tanànan'i Bata dia vao avy nahazo tsindrona 120 tapitrisa-euro ($ 133-tapitrisa) avy amin'ny Development Bank of the Central Africa States.
Ny tarehimarika navoakan'ny Banky Iraisam-pirenena, ny isan'ny mpizahatany ho an'i Guinea Ekoatorialy dia tavela foana.
Ny ankamaroan'ny fizahan-tany dia porofo dia olona mpandraharaha, toy ny mpiasan'ny orinasan-tsolika, miala sasatra mandritra ny andro vitsivitsy, na manatrika fihaonambe angovo na toekarena.
"Mistery amin'ny any ivelany ny firenena, izay kivy tsy hiditra amin'ny fizotran'ny visa sarotra sy ny tsy fahampian'ny fotodrafitrasa fizahan-tany", hoy ny tranonkalan'ny mpikarakara ny fizahan-tany anglisy Undiscovered Destinations.
Vitsy ny Equatoguineans no manana vintana hijanona amin'ny toerana toy izany. Ao amin'ny hotely Sipopo, ny efitrano iray fototra dia mitentina 200 Euro mahery ($ 224) isan'alina, raha 850 euro kosa ny trano manokana. Ny fahitana tahirin-tsolika midadasika any amorontsiraka tamin'ny tapaky ny taona 1990 dia nampiroborobo ny vola miditra nasionaly amin'ny vola mitentina 19,500 XNUMX $ isan-taona isan-taona, araka ny fandaharan'asan'ny UN Development Program.
Saingy mahasoa elita kely iray eo amin'ny mponina 1.2 tapitrisa ny harena. Maherin'ny roa ampahatelon'ny Equatoguinean no miaina ambanin'ny tsipika fahantrana, ary 55 isanjaton'ny mponina mihoatra ny 15 no tsy an'asa.
Hivadika ho Vovonana Nepal i Warsaw ary mety ho anisan'izany ianao
Ny Sendikan'ny Hotely any Waikiki dia mihamatanjaka: asa iray no ampy!